Vidiyo 10 - Schoolslọ akwụkwọ nke Safelọ Nche | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Vidio 10 - Schoolslọ akwụkwọ nke Safelọ Nche.
Dysphoria okike, Schoolslọ akwụkwọ na-echekwa echedo - / Site mere
10 vidiyo - Dysphoria nke Nwata.
Schoolslọ akwụkwọ nchekwa:
Anyị ga-ekwu maka ihe, karịchaa n’Ọstrelia. Ndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n’azụ ihe a niile, ike n’azụ ihe a. Kedu nke na-eme? Come si a thataa mee na ihe a emeela nke ọma n’oge na-adịghị anya? A nụtụbeghị nke a afọ iri gara aga, anụghị afọ ise gara aga. Ugbu a, emebere mmemme ụlọ akwụkwọ, ụlọ mposi pụrụ iche, yunifọms agbanweela. Nnukwu nzaghachi nke obodo. Ebee ka o si abịa kedu ka o si emetụta ya? Ọfọn, ebe ha si abịa, enwere ihe akpọrọ Mmemme Schoolslọ Akwụkwọ Nchedo nke ndị mmadụ na-elelị. O kwuru na anyị kwesịrị inwe ụlọ akwụkwọ dị mma n'ihi na anyị achọghị ka ụlọ akwụkwọ bụrụ ụlọ ọrụ na-achọ okwu. Cannye nwere ike ịrụ ụka na nke ahụ? Ọ dịghị onye n'ime anyị chọrọ ụlọ ọrụ na-emegbu ndị mmadụ. Ha na-ekwu, sị, “Ihe eji ehi okwu metụtara ọ bụghị naanị ụmụaka pere mpe ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọ metụtara nwata ahụ nke mgbagwoju anya gbasara ndị nwoke ma ọ bụ nwanyị. Kedu ihe bụ nke ahụ? Aga m agwa gị ihe nke ahụ bụ. Nke ahụ bụ ebe anyị abụghị ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị, ọnụọgụ abụọ, anyị niile nọ n'etiti. Ihe a gha eme ka ndi mmadu gha aghara, anyi aghaghikwa iyi ha egwu.
Ọfọn, ọ dịghị onye ọ bụla n'ime anyị nụrụ banyere afọ ise a, afọ iri gara aga, mana ugbu a ọ bụ isi okwu na mmemme Schoollọ Akwụkwọ Nchekwa, dị ka akụkụ nke azụmahịa a, nwere usoro akọwapụtara nke ọma ịkọwa ụmụaka, site n'aka ndị isi ha , ndị nkụzi ha, n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị nne na nna amaghị ihe na-eme, ihe azụmahịa transgender a niile bụ maka. Kedu ka ị bụghị nwa agbọghọ ma ọ bụ nwoke. Nọ ebe n'etiti. Ọ bụkwa gị ka ikpebi.
Kedu ihe anyị ga-eme ugbu a? Ọfọn, enwere okwu mmekọahụ banyere ebe ahụ, ihe ọ bụla nke ahụ nwere ike ịpụta. “Ọfọn, anyị ga-enyere gị aka ịghọta na ọ dị mkpa ka ị mara; aha nke akụkụ, mkpa ka ị mara ihe a amụ bụ, a vulva bụ, a ara bụ. Ikwesiri ima ka ihe ndia si aru oru ma oburu n’acho ịmatakwu, enwere ndi webusaiti puru iche igha elu. Ha ga-akọwara gị ya. Ka anyị kwuo na ị bụ nwa agbọghọ na ị chere na ị bụ nwoke, ọ dị mma, weebụsaịtị ahụ ga-akụziri gị otu esi etinye ihe nrachi ka ara gị wee nwee ike ịgba ọchịchịrị ma ị nwere ike ime nke a na-enweghị nne na nna maara. Ma ọ bụ ọ bụrụ na i chere na ị bụ nwoke, ị nwere ike itinye thickener n'etiti ụkwụ gị ọ dị ka nwata. Ọ dịghị mkpa ka ị gwa nne na nna banyere ihe a n’ihi na ha nwere ike ghara ịghọta.
Yabụ enwere mmemme indoctrination gbasara ụmụaka gbasara echiche nwoke na nwanyị na - ele anya dị ka ihe gbasara nwoke ma ọ bụ ebe a na - ekwu maka weebụsaịtị nwere nkọwa nke na - eduzi ha.
Ugbu a, ka otuto ha, gọọmenti etiti gọọmentị n'ime puku abụọ na iri na isii chere, "Ikuku na nke abụọ, anyị enweghị mmasị na nke a," ha wepụrụ ego gọọmentị etiti. Nke ahụ dị oke egwu. Mana ozugbo, Premier Andrews nke Victoria kwuru, "Ọfọn, ọ bụrụ na gọọmentị etiti anabataghị ụgwọ ahụ, nke ọma, anyị ga-eburu ụgwọ ahụ." Yabụ, gọọmentị itinye aka n'ịgbatị ya. Mana echere m na nrụgide ahụ riri nne nke ukwuu ma ha bịara bụrụ ọkaibe karị na mbọ ha ka ewe wepụ oke ibu na-ewe iwe ma werekwa ezi echiche karịa.
Kedu ka ị si akụziri ndị nkuzi ikuziri ụmụaka ihe? Yabụ, ihe pụtara bụ ihe a na Victoria na ihe yiri ya nke a na-atụle na New South Wales nke akpọrọ Resilience, Rights and Respect Relations. Nye nwere ike ịrụ ụka na nke ahụ? Anyị niile chọrọ nke ahụ, nke ahụ bụ nnukwu ihe. Gịnị ka ọ pụtara n'ezie? Ikike iguzosi ike na mmekọrịta na nkwanye ùgwù. Gịnị ka nke ahụ pụtara n'ezie?
M kwuru. Afọ mbụ n'ụlọ akwụkwọ bụ oge dị mkpa iji lụsoo ọnọdụ aghụghọ anya. ” Alda na mma. “Dabere na okike na ndiiche ndi ọzọ. Ọ bara uru ịrụ ọrụ doro anya. ” Nke a bụ maka ndị nkuzi. “Anyị na ụmụaka ndị a na-arụ ọrụ doro anya iji mara, ịchọpụta ma mee ememme dị iche iche.” Anyị anaghị ekwu okwu ebe a amaokwu India, ma ọ bụ German na ihe ọ bụla. Innuendo na nke a, ihe ọ pụtara bụ na ọ bụ njirimara nwoke na nwanyị. Ahh, kedu ka anyị si akọwa mmekọahụ n'onwe ya? "Ikike mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya." Kedu ihe nke ahụ pụtara? Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị bụ nwoke na ị bụghị, mgbe ahụ nke a bụ ihe nkịtị. Nke a bụ akụkụ nke oke mmiri nke nwoke. Ihe i chere ị bụ bụ site na gburugburu ebe obibi gị na-anwa ịkụziri gị.
“Ya mere, enyere ụmụaka aka ịchọpụta, nyere aka ịchọpụta, na ịma aka maka mmachi ọtụtụ ihe ọdịnala ọdịnala si dị. " Ọtụtụ! Ole ka ha di? Enwere nwoke na nwanyi, ya bu ihe anyi nweburu. Mmadụ ole ka anyị nwere ugbu a? Ole ka umuaka ga - adi nyere aka ịchọpụta ma maa aka ma kpaa nkata? Kedu usoro iwu nwoke na nwanyị? Ọfọn, nke a ekwughị. Ma na ihe ndi ozo site na akwukwo a,
enwere ọtụtụ, ọtụtụ, ọtụtụ ọnya ị nwere ike ịbụ. Mmekọ nwoke na nwanyị, nwoke na nwoke ma ọ bụ nwanyị, nwoke idina nwoke, nwoke na nwanyị, nwoke ma ọ bụ nwanyị, ụdị nwoke isii nwere uche dị mgbagwoju anya nke ị nwere ike mata. Ọbụghị otu ugboro, mana ị nwere ike gbanwee.
Yabụ, edeghị ya ebe a, "Anyị ga na-agwa ụmụ, ụmụntakịrị, na enwere ọtụtụ ihe dị iche iche, ọ bụghị naanị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, kama ọtụtụ ihe dị iche iche, ị ga - agbanwe." Nke ahụ ekwughị ya ebe a, mana nke ahụ bụ ihe nke a pụtara. Olee otu anyi si eme ya? Gụọ klas ụfọdụ akụkọ dị iche iche gbasara ụmụ nwoke. " Ọma. “Soro ụmụaka na-emekọ aha. Ọ dị mma, ka anyị gbadaa na nitty gritty.
Ọkwa nke mbụ na nke abụọ: Kedu ihe ị ga-eme? M na-agụ nke a n'ihi na ị gaghị enwe ike ịme ihe a. Ọkwa otu na abụọ. “Mee ka okwu nwoke na nwanyi mara. Kwuo ihe nwoke ịbụ nwa agbọghọ pụtara, ” na ihe dị n’etiti. “Echiche ndị a nwere ike ịgbanwe ka oge na-aga. Na-agụrụ ụmụaka ndị a akwụkwọ dị iche iche. ” Kedu ihe mere Mathematics, Akụkọ mgbe ochie? “Kụzie na mgbe ụfọdụ nne na nna ụmụ nwanyị ma ọ bụ nne na nna ụmụ abụọ na-elekọta ụmụaka.”
Ọkwa atọ na anọ: “Esemokwu dị n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ esiteghị n'akụkụ ahụ gị, ihe ndị a dị ka ọdịiche dị iche na nke ejiji ma ha nwere ike ịgbanwe ka oge na-aga. A na-akpọ ọdịiche ndị a okike. ” Nke a bụ echiche niile gbasara ịdị na nwoke na ị bụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị. Ma ị nọ n'etiti ma ọ nwere ike ịgbanwe dịka ejiji. Chọrọ inyinya a n'izu a? Ọma! Chọrọ ka ndị ọrụ ụgbọ na-aga izu na-abịa Ọma! Enweghị nchekasị, ọ bụ otu ihe ahụ. Ọ bụ naanị ntutu. Ọ bụ otu ihe.
Ọkwa ise ruo isii: “Ghọta ọdịiche dị n'etiti ọdịiche dị n'okike nke ọmụmụ.” Nke ahụ ga-abụ chromosom na ngwa pụrụ iche, “Na ndị mụtara,” … Nke a bụ gobbledegook, “Ndịrịta iche nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọdịbendị ha mụrụ.” N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị na-eche na ị bụ nwoke, mana ị na-eche na ị bụ nwa agbọghọ, ọ bụ ndị mụrụ gị, ọ bụ ọha na eze na-eme ka ị na-eche na ị bụ nwata naanị n'ihi na ị nwere akụkụ nwoke. Ebe uche gị n'eziokwu, na-eduzi gị ebe ọzọ. Nke ahụ bụ ihe nke a pụtara.
Mmega echiche uche. Ugbu a ha na-ekwu okwu n'etiti onwe ha. “Will ga-achọpụta ma maa mgbagha na ikike ịmachi ụdị ọdịnala si dị. ” Ndị a bụ ụmụaka ise na isii. Ebe echiche a dị, ị chịkọtara ha ọnụ, nri, “Ka anyị tụlee otu esi achọpụta ma maa aka ịma oke njedebe nke ọtụtụ ọdịnala gbasara nwoke na nwanyị.” Kedu ihe nke ahụ pụtara? Ugbu a, anyị ga-ekwu maka otu enweghị ihe dị ka nwatakịrị nwoke na nwa agbọghọ, ọ bụkwa ihe gbasara nwoke na nwanyị. Anyị ga-ekwu maka nke a.
Nyochaa njirimara nwoke na nwoke, ịma aka banyere echiche dị iche iche wee mụta iji akpọrọ ihe na ịkwanyere ugwu ugwu na ndịiche echiche. Ghọta usoro okwu dị mkpa iji ghọta gbasara mmekọahụ na ụdị okike. ” Ihe niile na-alaghachi na otu echiche a.
Ọkwa asaa na asatọ: “E nwere okike nke atọ.” Ugbu a, anyị na-akọwapụta ihe. Anyị abụghị ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ; anyị anọwo na-agwa gị nke a kemgbe afọ anọ ma ọ bụ ise gara aga. Ugbu a ihe okwu a bụ transgender ma kọwaa otu esi aghọ iwu. Ma na mbido, e nwere ụdị ụdị troglodytes ahụ, ndị na-achọghị mgbanwe na Ndị Kraịst na ndị ọzọ na-asị, "Ọfụma dabere na nke abụọ, anyị echeghị na nke a bụ ezigbo echiche."
Enwere ihe mmuta di na akuziri n’ime nka.
Ọkwa itoolu na iri: “Olee mgbe oge kwesịrị iji susuo onwe m ọnụ, ikerịta ihe osise nke mmekọahụ, inwe mmekọahụ, ọnụ na akụkụ mmetụ nwoke na nwanyị?” Ọ dị mma, mgbe ahụ enwere ndụmọdụ nye onye nkuzi ugbu a. Mee ka ọnọdụ gị dị ọkụ ma hapụ ya ka ọ bụrụ ihe egwuregwu. Ọ nwere ike ịba uru ịnweta nwatakịrị onye nkuzi ma ọ bụ onye ọrụ ibe ya iji nye aka maka ọrụ ahụ. Kpọgidere na nke abụọ. Kedu ihe ị na-ekwu ugbu a? Ghọrọ onye ọzọ? Nkwenye!
“Ọrụ dị iche iche gụnyere Kelly dị afọ iri na anọ, onye na-eche na ọ ga-abụ nwanyị nwere mmasị nwanyị. Grace, iri na anọ, bụ onye na-enwe mmekọahụ kemgbe afọ iri na atọ. ” Play na-egwu ya ma na-ekwu maka ihe ọ bụ. “Megan, afọ iri na asaa, onye nwere mmadụ iri na ise, gụnyere ndị toro eto ma chee na ọ ga-abụ nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya ka emechara ihe a niile. Anyị kwesịrị ikwu maka nke a ma rụọ ọrụ niile. Jesse, iri na asatọ, onye na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ma na-ekwurịta banyere mmekọahụ nkịtị ". Nke a dochiela ịgụ na ide. Nke a bụ ihe echiche dị iche iche abịala anyị. Kedu, onye, ​​kwere ihe a!
Vidio 10 - Schoolslọ Akwụkwọ Nchedo - Achịkwa - Pịa> Iji budata PDF ebe a.